Faa'iidooyinka Caanaha Geela Oo Ay Dunida Imika Ku Baraarugtay
Friday July 12, 2019 - 09:14:13 in News by Hadhwanaag News
Isticmaalka caanaha Geela ayaa maalman aad ugu soo batay dunida.
''Waxa aanu dareenaa farxad iyo in aan meel sare joogno marka aan wax soo saarka caanaha geela oo caafimaadka badan leh isticmaalayo. Waxaanu geela u aragnaa in uu ka mid yahay qoyskeena'',ayay tiri Lauren.
''Waa sida dadka oo kale, oo waxay leeyihiin dabeecada kala duwan,aad bay u aqli badan yihiin, naxariista iyo jaceylka ayay wax ka yaqaanaan,Waad la fariisan kartaa oo xaaladda jirta kala sheekaysan karataa, wayna fahmayaan''.
''Waa xayawaan aad u weyn balse haddii aad xushmeyso caqligooda iyo naxariistooda waa ay fududahay in la dhaqdo''.
Inkastoo caanaha geela aad loo isticmaalo haddana qiimahoodu waa uu saareeyaa oo caanaha lo'da waxay ka qaalisan-yihiin 12 jeer